ထုတ်လုပ်ရေးဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေး | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဗီဒီယို Editor ကို
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဗီဒီယို Editor ကို
ရာထူး: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဗီဒီယို Editor ကို
ကုမ္ပဏီ: Livevox, Inc မှ
အကျဉ်းချုပ် / ရည်ရွယ်ချက်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကျနော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်း ?? s ကိုရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖော်ပြသောလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ် post တစ်ခုအလုပ်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဗီဒီယိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့တကမ္ဘာလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်း featuring နှင့်ဤကုန်ကြမ်းရိုက်ကူးယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, စည်းလုံးပုံပြင်ကိုဖန်တီးရန် post-ထုတ်လုပ်မှု / တည်းဖြတ်အနုပညာရှင်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ် iPhones အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုများတစ်ဦးစုဆောင်းမှုရှိသည်။
မရှိမဖြစ် Functions များ: လက်ရှိ iPhone အရင်းအမြစ်ဗီဒီယိုများထံမှကောက်နှုတ်ချက်ကို select နှင့် LiveVox အကြောင်း 5-10 -minute ဗီဒီယိုကိုဖနျတီးဖို့ LiveVox HR နှင့်အတူမိတ်ဖက်။ နောက်ဆုံးအလုပ်ထုတ်ကုန် LiveVox ကော်ပိုရိတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များတွင်ပို့စ်တင်ဘို့သင့်လျော်ဖြစ်ရပါမည်။ Project မှ 20-30 နာရီအတွက်ဖန်တီးအတိုင်းလိုက်နာ-မှတဆင့်အဆုံးသတ်ရည်မှန်းချက်ရူပါရုံကိုအတူသေချာဖို့ HR ညှိနှိုင်းရေးမှူးအနားမှာအလုပ်လုပ်ယူခန့်မှန်းရသည်။ The HR ညှိနှိုင်းရေးမှူးလိုအပ်မည်သည့်အပိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကူညီပေးပါမည်။
လိုအပ်သောပညာရေးနှင့်အတွေ့အကြုံ: Adobe Premiere Pro ကိုဖြစ်စေနှင့်အတူအစိုင်အခဲအတွေ့အကြုံ, နောက်ဆုံးဖြတ်, Magix Movie, Edit ကို, ဒါမှမဟုတ်အထွတ်အထိပ်စတူဒီယိုလိုအပ်သည်။ အခြားသူများနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်မဆိုပြောင်းလဲနေတဲ့တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မီဒီယာပိုမိုနှစ်သက်ရိုက်ကူးအတွက်ကျောင်းသားသို့မဟုတ်ဘွဲ့ရ။ သင့်ရဲ့အလုပ် / အစုစုအချို့ကိုဥပမာများကိုပေးစွမ်းပါသည် ကျေးဇူးပြု.
Pay ကို - $ 30 / နာရီ
ဒါကယာယီစာချုပ်တာဝန်ကျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးလိုင်စင်လွတ်လပ်သောလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာမဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြတ်တောက်နှင့်နှိမ်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးလုပ်ခလစာဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်သင်ကပေးဆောင်နိုင်ပါ။
LiveVox တန်းတူအခွင့်အလမ်းအလုပ်ခွင်နှင့်အပြုသဘောဆောင်အရေးယူအလုပ်ရှင်ဖြစ်ဂုဏ်ယူသည်။ ကျနော်တို့မခွဲခြားဘဲလူမျိုး, အသားအရောင်, မျိုးရိုး, ဘာသာရေး, လိင်, မူရင်းနိုင်ငံသား, လိင်, အသက်, နိုင်ငံသား, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, မသန်စွမ်း, ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာသို့မဟုတ်ဝါရင့်အဆင့်အတန်းနှင့်ညီမျှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကိုမှကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျနော်တို့မခွဲခြားဘဲတရားဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ကိုက်ညီပြစ်မှုဆိုင်ရာသမိုင်း၏အရည်အချင်းပြည့်မီလျှောက်ထားစဉ်းစားပါ။ သငျသညျနေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်သည်မသန်မစွမ်းသို့မဟုတ်အထူးလိုအပ်ချက်ရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း join ဖို့မတူကွဲပြားနောက်ခံ, အကျိုးစီးပွားနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူစမတ်, ပါရမီကလူကိုရောက်စေဖို့ရှာဖွေနေပါတယ်။
post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2017-07-31
ယခင်: ဘရော့ဒ်ဝေးဗီဒီယိုရဲ့ဆူး Pelino Fame induction အခမ်းအနား၏ 2017 ရော့ခ်ပြီးတော့ Roll Hall ကအဘို့အ Primetime သူဟာ Emmy Award ဆု Nomination လက်ခံတွေ့ဆုံ